Qaybaha boggaga hore ee Geofumadas
LandViewer: image dhawrid Earth falanqaynta ee waqtiga dhabta ah ka siiyaa biraawsarkaaga
Saynisyahannada xogta, injineerada GIS, iyo soosaarayaasha softiweerka ee EOS, oo ah shirkad fadhigeedu yahay Kaliforniya, ayaa dhowaan soo saaray qalab daruur ku dhisan oo daruur ku saleysan kaas oo awood u siinaya adeegsadayaasha, saxafiyiinta, cilmi baarayaasha, iyo ardayda inay baaraan oo ay falanqeeyaan tiro aad u tiro badan oo xog ah Daawashada dhulka. LandViewer waa adeeg wax soo saar ...
Featured, Geospatial - GIS, tabo cusub
Waxaan hayaa xogta LiDAR - hadda waa maxay?
Maqaal aad u xiiso badan oo uu daabacay dhowaan David Mckittrick, halkaas oo uu kaga hadlayo saamaynta ay leedahay aqoon ku filan ee farsamooyinka la xidhiidha la shaqaynta LiDAR ee GIS iyo tixraaca Global Mapper oo ah qalab taageero oo lagu farsameeyo xogta la helay. Markii aan aqriyay maqaalka waxaan ka degay ...
Featured, tabo cusub
Qof baa ku qasbay inuu muujiyo fikirkaas oo ah inuu meel isla fadhiisto, koox dad ah oo gebi ahaanba kala fog shakhsiyadda, fikirka iyo duruufaha dhaqan, laakiin lagu daro kala duwanaanshaha ku hadla Isbaanishka, waxay si xoog leh u jecel yihiin waxa ka dhacaya duruufaha geospatial. Waxay ku saabsan tahay "Aniga Shirkii Geobloggers Qaranka", waxaa lagu dalacsiiyay ...
Featured, egeomates My
In kasta oo waxa na xiiseynaya dhamaadka layliga sidan oo kale ah in la soo saaro qeybaha isweydaarsiga xariiqda xariiqda, xisaabinta xaddiga la jaray, qararka, ama astaamaha naftooda, waxaan ku arki doonnaa qeybtaan jiilka tusaalaha dhulka dhijitaalka ah goorma la soo dhoofinayaa qodobbada, si ...
System Camera codsanay-Streetview
Applied Streetview Qalabka iyo Nidaamyada waa shey sannado khibrad u leh qeyb ka mid ah macaamiisha. Laga soo bilaabo macmiilkoodii ugu horreeyay ee abuuraya sawir gacmeed lagu soo rogay Bogota, Kolombiya, waxay ku ballaariyeen macaamiishooda dhammaan qaaradaha adduunka, iyagoo ka qaybqaata mashaariic iyo warshado kala duwan. Codsiyada qalabkooda waa ballaaran yihiin sida aan qiyaasi karno, iyadoo la tixgelinayo in yar oo ...